စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တွင် LLC ၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းရှိလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
●ဘဏ်အကောင့်၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဂရီနာဒင်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများရှိဂရင်းနင်းများ၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မည်သို့ကူညီမည်နည်း။
ထုတ်လုပ်သူသန်းသန်းစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်သည်စိန့်ဗင်းဆင့်၊ ဂရီနဒင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုအတွက်ဖောက်သည်များအားအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကြံဥာဏ်များပေးသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းများမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဂရင်းနာဒင်များနှင့်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီသည် Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်ဘဏ်အကောင့်ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
စိန့်ဗင်းဆင့်၌မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဂရီနဒင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်ကိရိယာအစုံပါ ၀ င်ခြင်း (အမိန့်ပေးလျှင်)
Saint Vincent၊ Grenadines နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများနှင့်အတူစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နိုင်ငံများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နိုင်ငံများအတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နိုင်ငံများအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines များအတွက် CRM Solutions၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက် virtual office၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားနိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံသို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည်။
သင်၏ Saint Vincent နှင့် Grenadines LLC အမည်ကိုယနေ့ရယူပါ။
သင်၏ Saint Vincent နှင့် Grenadines LLC အမည်ရှာဖွေပါ
နိဒါန်း Saint Vincent နှင့် Grenadines ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ခြင်း
Saint Vincent နှင့် Grenadines အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်ကျွန်းများ၊ ကာရစ်ဘီယန်အရှေ့ပိုင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ကျွန်းနှင့်မြောက်ဘက်ဂရင်နဒိန်းကျွန်းများပါဝင်ပြီးတောင်ဘက်တွင်ဂရီနာဒါသို့ ဦး တည်သည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်ကျွန်းသည်စိန့်လူစီယာအနောက်တောင်ဘက်မိုင် ၂၀ (၃၂ ကီလိုမီတာ) နှင့်ဘာဘေးဒိုးစ်အနောက်ဘက်မိုင် ၁၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ၁၈ မိုင် (၃၀ ကီလိုမီတာ) အရှည်ရှိပြီးအများဆုံးအကျယ်မှာ ၁၁ မိုင် (၁၈ ကီလိုမီတာ) ရှိသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်သည်ဗြိတိသျှကိုလိုနီသမိုင်းကြောင်းရှိပြီးယခုကာရစ်ဘီယံပြည်နယ်များအဖွဲ့၊ ကာရစ်ခ်မ်၊ ဓနသဟာယနိုင်ငံများ၊ အမေရိကအတွက်ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့်လက်တင်အမေရိကနှင့်ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံများအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်စီးပွါးရေးတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ assumed မှပါ ၀ င်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်းများတစ်လျှောက်ရှိလေဆိပ်များမှတစ်ဆင့် Grenadines များပိုမို ၀ င်ရောက်နိုင်မှုနှင့်ခေတ်မီလှေများပိုမိုအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသို့မဟုတ်သူမ၏သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်လှပသောကမ်းခြေများကြောင့်ကျော်ကြားသော Grenadines သည်နိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ of ၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အထူးသဖြင့်ရွက်လှေနှင့်အားကစားငါးဖမ်းခြင်းများကိုနှစ်သက်သူများဖြစ်ပြီးကာရစ်ဘီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်နေ၊ ပင်လယ်၊ Mustique ကျွန်းရှိ Grenadines များထဲမှတစ်ခုသည်မြေပိုင်ရှင်များစုပေါင်းပြီးကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်သည်။ အများစုမှာသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပန်းဖြေသူများအားငှားရမ်းကြသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်ကျွန်းပေါ်တွင်ဂေဟဗေဒခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအားပေးနေသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်၏စီးပွားရေးသည်အဓိကအားဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းအကြီးအကျယ်ကျဆင်းနေသော်လည်းတိုင်းပြည်သည်မြှားနုတ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသောနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် စိန့်ဗင်းဆင့်သည်တစ်ချိန်ကအကောင်းဆုံးတင်ပို့သူဖြစ်သည်။ ဝါနှင့်ကြံကြံများကိုစီးပွားရေးအတွက်ယခင်ကအရေးပါခဲ့သည်၊ သို့သော် ၂၀ ရာစု၏နောက်ဆုံးတစ်ဝက်ကတည်းကငှက်ပျောသီးသည်အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည်။ အခြားအရေးကြီးသောကောက်ပဲသီးနှံများမှာအာလူးချိုမြိန်ခြင်း၊ ငှက်ပျောများ၊ ယမ်းများ၊ အုန်းသီးများနှင့် dasheen နှင့် eddoes (တာရိုအမျိုးအစားများ) တို့ပါ ၀ င်သည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်လုပ်ငန်းများစတင်ခြင်းနှင့် Saint Vincent နှင့် Grenadines သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ တို့၌တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းများရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ပေးသည်။ သင်၏အလုပ်အကိုင်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များတွင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုပါငှားရမ်းခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နစ်များတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ဖြေရှင်းချက်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းန်ရှိ virtual ရုံး၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နယ်များတွင် ၀ ယ်ယူမှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်အရေအတွက်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းရှိစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်များတွင်ဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းနင်းဒင်းများရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းန်ရှိ CRM Solutions၊ ကုန်သည်များစာရင်းစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေရေးဂိတ်စိန့်ဗင်းဆင့်၊ အရင်းအနှီးငွေကြေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး၊ လုံ့လဝီရိယရှိမှုနှင့်လိုက်နာမှု၊ အိုင်တီ solu စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနာတွင်ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနစ်များတွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ စျေးနှုန်းချိုသာပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အမည်အချို့ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်တည်ထောင်ပြီးသောကုမ္ပဏီများအတွက် - စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များမှစိန့်ဗင်းဆင့်၊ ဂရီနာဒင်နှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်၌သင်၏အလုပ်နေရာများကိုဖြည့်ရန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရည်အချင်းရှိသော ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရာတွင်လည်းကူညီသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်အရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းရှိ virtual နံပါတ်များ၊ Vincent နှင့် Grenadines၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ စိန့် Vincent ရှိ CRM Solutions နှင့် Grenadines, Saint ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်နှင့်ငွေပေးချေရေးဂိတ် Vincent နှင့် Grenadines, Saint Vincent နှင့် t အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းများ၌လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်တွင်ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်များတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းနစ်များတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနာတွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနာရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုအနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောဈေးနှုန်းဖြင့်ဖော်ပြခြင်း။
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိ LLC အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Saint Vincent နှင့် Grenadines များအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Saint Vincent၊ Grenadines နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ အတိုင်းအတာအရစီးပွားရေးရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးသောစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များနှင့် Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းသည်သင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း
Saint Vincent နှင့် Grenadines စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account Saint Vincent နှင့် Grenadines / Payment Gateway Saint Vincent နှင့် Grenadines
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines BUSINESS COMPANY အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း Saint Vincent နှင့် Grenadines
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာတိုးပွားလာခြင်း
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines Offshore ကုမ္ပဏီများအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal Saint Vincent နှင့် Grenadines
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင် LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● LLC စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများ (၁ နှစ်) အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကြေး - ဒေါ်လာ ၈၀၀
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းထည့်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၇၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင် LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်ပြည်နယ်များမှ LLC အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခွန်ပေးဆောင်မှု
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းရှိ LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့် LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးခြင်း
● Saint Vincent ရှိ Grenadines နှင့် LLC အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ခြင်း
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်၌သင်၏ LLC အတွက်စံပြကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အသင်းဝင်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်လက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ အစုရှယ်ယာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ။
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်နှင့်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးကပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ သင်သည် Saint Vincent နှင့် Grenadines သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးစတင်ချင်လျှင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Saint Vincent နှင့် Grenadines များတွင်ဘဏ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
LLC Saint Vincent နှင့် Grenadines များအတွက် Merchant Account
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်ရှိ LLC အတွက်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်
LLC စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒီးယားနိုင်ငံသားများသည်သန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများမှတဆင့်
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်မှတ်ပုံတင်လိုပါက Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့် Saint Vincent နှင့် Grenadines ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကို ရှင်းလင်း၍ ဘက်မလိုက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂရီနာဒင်များနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းန်များတွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တို့မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုသင်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနင်းများအတွက်သင်လျှောက်ထားလိုပါက စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒီးနာများနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကျွန်တော်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကို Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိကုမ္ပဏီများအတွက်အသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
Saint Saint Vincent နှင့် Grenadines များအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
Saint Saint Vincent နှင့် Grenadines များအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း.
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းများ၌တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ သင်၏စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းရှိမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းများ၌အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသင်ပေးသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင် LLC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်များအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပေးသည်။ Saint Vincent၊ Grenadines နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ “ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာ” ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးပါသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိဂရင်းနာဒင်းနှင့်ဂရင်းနာဒင်၊ လီနင်နှင့်ဂရီနာဒင်ရှိလီကေးရှင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
မှတ်ပုံတင်တွင်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines များကိုကုမ္ပဏီအမည်ရှာဖွေပါ။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းအသင်းဝင်များအတွက်အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိ LLC အတွက်စိစစ်ရေးလက်မှတ်နှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိဂရီနာဒင်န်လီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီနှင့်ဂရီနာဒင်နာလက်မှတ်များစာအုပ်။
စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ဂရီနဒင်း / လီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းရှိဂရီနာဒင် / လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ။
မှတ်ပုံတင်ရုံး။ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင် LLC နှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းရှိဂရီနာဒင် / လီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ် (LLC) တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နိုင်ငံများတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းရှိဂရန်ဒီနစ် / လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ - LLC
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်လိုင်စင်မလိုပဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုထားသည့် Saint Vincent နှင့် Grenadines များကိုခွင့်ပြုလျှင် Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Vincent နှင့် Grenadines နှင့်သက်ဆိုင်သောဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုရန်။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္andာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံဆင်းသက်လာသောတူရိယာများ။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်ရှိအခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းနစ်များတွင်ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ရှိငွေလဲလှယ်ခြင်း၊
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချပေးရန်အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်မှုအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
ထုတ်လုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာကို Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့် Saint Vincent ရှိ Professional CFA နှင့် Grenadines၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုများ၊ Saint Vincent ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်နှင့် Grenadines ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်၊ ဂရီနာဒင်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများအတွက်ဂရီနဒင်းစ်တွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂရင်းနဒင်းများဟုလူသိများသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒီးယားရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ Kingstown ရှိ Corporate ၀ န်ဆောင်မှုများ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိ Corporate Services | ဗင်းဆင့်အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိ Grenadines နှင့် Saint Vincent ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဂrenadinesများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဂရီနာဒင်များနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်ဂရီနဒီနာများ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိဂရီနဒင်းန်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဂရီနာဒင်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိဂရန်ဒီဒင်များနှင့်ဂရီနာဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ | Kingstown ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ | စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | Vincent ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
Saint Vincent နှင့် Grenadines များအတွက်ကုန်သည်အကောင့်
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း.
သင်၏ကုမ္ပဏီသည် Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်သင်ခွဲဝေနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းများတွင်ဖြစ်သည်။
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းနစ်များတွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တွင်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines များမှသင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုသင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုချန်ထားနိုင်သည်။
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိအဆင်သင့်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ စိန့်ဗင်းဆင့်၊ ဂရီနာဒင်းနှင့်အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံ၊အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ရှိသည်
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း.
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းများရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒင်းများမှကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများထံမှ။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များရှိသင်၏ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Saint Vincent နှင့် Grenadines များအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိ VoIP ဖြေရှင်းမှုများ၊ Saint Vincent ရှိစီးပွားရေး VoIP နှင့် Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိ Grenadines လူနေအိမ် VoIP ။
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်မှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီအသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနာတွင် CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်တီထွင်မှုနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးမှု။
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ရန်နှင့်အစိုးရ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်တို့နှင့်လျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေနေသူများ။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ် (သို့) ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရာနေရာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်ပါ ၀ င်သော Grenadines ၏တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီမည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်တည်ရှိသည့် LLC နှင့်ဂရီနာဒင်းများနေထိုင်သူများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်တည်ရှိသည့် LLC နှင့်ဂရီနဒင်းများ၊ ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းများ၊ Offshore LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်းနာဒင်တွင်အော့ဖ်ရာ LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ LLC တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines Offshore LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနားကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင် LLC ပါဝင်မှုကိုထောက်ပံ့ခြင်း လီနင်ဗင်းနစ်နှင့်ဂရန်းဒီနီးစ်များအတွင်းလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင် IBC ပါဝင်မှု | စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်များတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင် IC ပါဝင်မှု | စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနင်းများတွင် LLC ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်နိုင်ငံခြားသားများနေထိုင်သူများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်တွင်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်တာ ၀ န်ရှိသည့်ဂရီနာဒင်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်အခြေချသည့်ဂrenadines၊ ကမ်းလွန်ကန့်သတ်ခံထားရသောကုမ္ပဏီနှင့် Grenadines၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်ဂရီနာဒင်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်လီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်းနာဒင်လီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်ကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားနိုင်ငံသားများနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင် IBC ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းမှု၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်း IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်း IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒိန်းများကမ်းလွန်ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်ပြုလုပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နိုင်ငံသားများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်အခြေချသည့်ဂrenadines၊ ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီနှင့်ဂရီနဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂရီနဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနားကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနားကမ်းလွန် Internatio nal စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တွင်နေထိုင်သူများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်းနာဒိုက်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီနှင့်ဂရီနာဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီနှင့်ဂရီနာဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နိုင်ငံများရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနီးယားကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနားကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနားကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းရှိ IC နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းတို့တွင် IC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ခံသည်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင် IC ပါဝင်ခြင်းနှင့်ဂရီနဒင်းများ၊ ကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်းနာဒင်တွင်ကမ်းလွန်အိုင်စီတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းအိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်း IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒိန်းများကမ်းလွန်အိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းကမ်းလွန်အိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်စ်၌နေထိုင်သူများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တွင် LLC တည်ထောင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့် LLC ကုမ္ပဏီနှင့်ဂရန်းဒင်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းကုမ္ပဏီများတွင်ပါဝင်သည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းန်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းန်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနားကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်နေထိုင်သူများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်များတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းနစ်များတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးနာများရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်း IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines IBC ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒိန်းများကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ပင်လယ်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနစ်များတွင် LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်တွင်လီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။ | IBC ကို Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရိတို့တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်တွင် IC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနင်းများတွင် LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကုမ္ပဏီကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်နိုင်ငံများတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နိုင်ငံများမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်းနာဒင်နိုင်ငံများမှကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောမြို့များမှာ - Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကိန်းတောင်း၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Kingstown မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Kingstown မှမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ King Vin မှမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ St Vincent တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း Vincent မှ Vincent မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vincent ထံမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vincent ထံမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ဈေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Kingstown တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်အနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဗင်းဆင့်အတွက်စျေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိဂရိုဒီဒင်းကုမ္ပဏီများနှင့်ဂရီနာဒင်များနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ရှိမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိသည်။ Kingstown ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၊ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Kingstown ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Kingstown ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၊ Kingstown ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Kingstown ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ St Vincent ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိစိန့်ဗင်းဆင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ် Vincent ရှိ Vincent ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၊ Vincent ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Vincent ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ။ Kingstown တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဗင်းဆင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်
Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်အနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနာများမှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်ကုမ္ပဏီ၊ Grenadines နှင့် Kingstown ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Kingstown ရှိ Kingstown ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Kingstown ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Kingstown ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Vincent ရှိ rvices, Vincent ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Vincent ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Vincent ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု, Vincent ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Kingstown တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Vincent တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Grenadines သည် Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်တည်ထောင်ပြီး Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Kingstown တွင်တည်ထောင်ပြီး Kingstown တွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ကူညီရန်မြို့များသည် Kingstown တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီ၊ ဗင်းဆင့်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ထောက်ပံ့သောမြို့များ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်ရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ | Kingstown တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Vincent ရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်များတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိဂရင်းနာဒင်နှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Kingstown တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Kingstown တွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ စိန့် Vincent ရှိ non-resident များအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ စိန့် Vincent ရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် စိန့်ဗင်းဆင့်၌ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗင်းဆင့်၌နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗင်းဆင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗင်းဆင့်တွင်ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Saint Vincent နှင့် Grenadines | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Kingstown | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ St Vincent | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Vincent
Saint Vincent နှင့် Grenadines များတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းတို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ကုမ္ပဏီများတွင်ကုန်ကျစရိတ်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်တို့တွင်ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ကျစရိတ်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနာတွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျမှု။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများရှိကုန်ကျစရိတ်များသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Kingstown ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး St Vincent ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Vincent ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်များတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်သို့မဟုတ်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းန်များတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်သို့မဟုတ်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်နယ်များတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းရန်စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိပါသည်။ အဆိုပါ Grenadines ။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်များတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Kingstown တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစိန့်ဗင်းဆင့်တွင်ထည့်သွင်းပါ ဗင်းဆင့်၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒီးယားတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာတာဝန်ယူနိုင်သောကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒီးယားတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒီးယားတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒီးယားတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင် LLC ကိုထည့်သွင်းပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒီးယားများတွင်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ IBC ကို Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ထည့်သွင်းပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနစ်များတွင် IC ကိုထည့်သွင်းပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်ရှိ LLC ကုမ္ပဏီ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂရီနဒိန်းများ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ဂရန်းဒီနစ်များ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်ကုမ္ပဏီများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိကြောင်းဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းများရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ | Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
သင်၏ Vincomcent Services ၀ န်ဆောင်မှုကို Saint Vincent နှင့် Grenadines သို့မဟုတ် Saint Vincent နှင့် Grenadines ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအထူးကောင်းမွန်သောအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ စိန့်ဗက်စ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အရည်အသွေးပြည့်မီသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းတို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဂရီနာဒင်းများကစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောစာရင်းကိုင်များ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒီးယားရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ်များတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်သူများကိုအထူးကူညီထောက်ပံမှု၊ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ဗင်းဆင့်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လိုလျှင်၊ သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ သင်အား Vincent နှင့် Grenadines တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Saint Vincent နှင့် Grenadines တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Saint Vincent နှင့် Grenadines တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Kingstown တွင်သို့မဟုတ် Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ သို့မဟုတ် Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Kingstown တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်စိန့်ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဗင်းဆင့်၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဗင်းဆင့်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ V ကိုအတွက်ကုမ္ပဏီ Vincent တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Vincent တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Vincent တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Vincent တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယားတွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Kingstown တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု စိန့်ဗင်းဆင့်တွင်အနည်းဆုံးသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Vincent တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒင်းနစ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတို့မှငွေကြေးခ ၀ ါချမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သော ၀ န်ထမ်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များမှစ။ သို့ဖြစ်စေ၊
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူမည်းများ (စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းဥပဒေများအရလူမည်းစာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်) ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်မှသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်ရှိသို့မဟုတ်မှ စ၍ သို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုဗေဒ၊ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းရှိတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားဓာတုပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံခြင်း။
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်ဒီဒင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိန့်ဗင်းဆင့်ရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်လူသားနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်း။
●မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒီးယန်းများမှ စ၍ သို့မဟုတ်မှ စ၍ လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်ကလေးမွေးစားခြင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းန်သို့ (သို့) မှသို့မဟုတ်သွားသည်။
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအခြေပြုသောစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်များအတွက်သီးသန့်ဖြစ်စေ၊
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်သို့ဖြစ်စေ၊ ဆီမှဖြစ်စေ၊ မှဖြစ်စေပိရမစ်ရောင်းအားတွင်ပါ ၀ င်နေသောဂရန်းဒီဒင်များရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ဗင်းဆင့်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့်ပါ ၀ င်သောဂရင်နဒီများမှပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း, စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း ဘဏ်အကောင့်, စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း ယုံကြည်မှု စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနာဒင်းအတွက်
Saint Vincent နှင့် Grenadines တည်နေရာ
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-saint-vincent-and-grenadines/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-saint-vincent-and-grenadines/ မှလာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-saint-vincent-and-grenadines/